मनोरन्जन – Page 66 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१६ मंसिर २०७७, मंगलवार ०३:०३ English
अभिनेता भुवन केसी समानुपातिकमा २१ आश्विन २०७०, सोमबार ००:३०
मोफसलकी गायिका तारा लिम्बुको दोस्रो प्रस्तुति ‘धैर्य’ बजारमा आउदै १८ आश्विन २०७०, शुक्रबार १९:३५
धरान । मोफसलकी उदयीमान गायिका तारा लिम्बु आफ्नो दोस्रो प्रस्तुति धैर्य एल्बम लिएर नेपाली सांगीतिक बजारमा आउदै छिन् । मोफसलकी गायिका तारा लिम्बुले ५ बर्ष अगाडी योजना पुरी सँग मिलेर नयाँ बाटो नामक एल्बम बजारमा ल्याएकी थिइन । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा बिगत ९ बर्ष देखि निरन्तर..
चन्द्र शर्मा लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा निर्वाचित १६ आश्विन २०७०, बुधबार ००:५९
सुर्खेत । मध्य पश्चिमको सुर्खेतमा सम्पन्न राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको ५ औं महाधिवेशनले अध्यक्षमा चन्द्र शर्मालाई निर्वाचित गरेको छ । लोक गायक शर्माले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विष्णु खत्रीलाई ७ सय ९१ मतले पछि पार्दै विजयी भएका हुन् । विष्णुले ४ सय ११ मत पाएका थिए ।..
संजय दत्तलाई जेलबाट १४ दिनको छुटी १५ आश्विन २०७०, मंगलवार २१:१५
पुनें । बलिउड अभिनेता संवय दत्तलाई पुने यरावदी जेलबाट १४ दिनको छुटी मिलेको छ। भारतिय कानुन अनुसार हरेक कैदीले बर्षको १४ दिनको छुटी पाउने नियम छ। यस नियम अनुसार सबै कैदीले नपाउने छुटी संजयले भने पाएका छन्। छुटिको समयमा संजयले आफनो पारिवारसँग बस्ने लगायत फिल्मको सुटिङ समेत गर्न..
फिलिपिन्सकी योङ विश्व सुन्दरी, ईशानी टप-१० १२ आश्विन २०७०, शनिबार १९:११
काठमाडौं, १२ असोज । फिलिपिन्सकी मेगन योङ बर्ष २०१३ को विश्व सुन्दरी घोषित् भएकी छन् । ईन्डोनेसियामा भएको प्रतिस्पर्धामा उनले शनिबार विश्व सुन्दरीको ताज पहिरिएकी हुन् । अमेरिकामा जन्मिएकी मेगन टिभी प्रस्तोता र फिल्मी कलाकारसमेत हुन् । उनलाई पूर्व विश्व सुन्दरी चीनकी यू वेनजियाले..
मिस नेपाल इसानी श्रेष्ठ मिस वर्ल्डको फाइनल चरणमा १२ आश्विन २०७०, शनिबार ०३:१९
काठमाडौं । मिस नेपाल २०१३ इसानी श्रेष्ठ मिस वर्ल्ड २०१३ को फाइनल चरणमा प्रवेश गर्न सफल भएकी छन् । ६३ जना सुन्दरीहरुको सहभागिता रहेको मिस वर्ल्ड २०१३ मा उनी टप १५ मा पर्न सफल भएकी हुन् । उनले 'ब्युटि विथ प्रपोज' को उपाधी जितेसँगै फाइनल चरणमा प्रवेश गर्न सफल भएकी हुन् । उनले यो उपाधीवापत..
संविधानसभामा नायक राजेश हमाल काग्रेसको, भुवन केसी एमालेको उम्मेदबार ११ आश्विन २०७०, शुक्रबार १०:२३
काठमाडौं । नायक राजेश हमाल नेपाली काग्रेसको तर्फबाट आगामि संविधानसभाको निर्वाचनमा उमेदवार बन्न भएका छन् । यस अघि निर शाह, राजकुमार राई लगायतका कलाकारहरुले काग्रेस सभापति सुशिल कोइरालालाई भेटी नायक हमाललाई समानुपातिक उमेदवारीमा समेट्न आग्रह गरेका थिए । हमालले आफु..
धोका दिए, भुवनलाई एमालेले, कमल थापालाई भुवनले ९ आश्विन २०७०, बुधबार १९:५९
काठमाडौं । बुधबार भुवनलाई राप्रपा नेपालले राखेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनि बिरामी भएको बहानामा उपस्थित भएनन् । राप्रपा नेपालको पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बुधबार केसी प्रवेश गर्ने कार्यक्रम राखिए पनि उनी गएनन् । ठूलै आड भरोसा सहित नायक भुवन केसी एमाले प्रवेश गरे ।..
अरू र ममा फरक छ :: अभिनेत्री रेखा थापा ९ आश्विन २०७०, बुधबार १९:५५
अहिले अभिनेत्री रेखा थापा चटारोमा छिन् । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ उठ्नु पनि छ भने अर्कोतर्फ आफूले बनाएको चलचित्र काली पनि रिलिज गर्नु छ । दुवैलाई समय दिनुपर्ने भएकाले अहिले उनले अन्य कुनै पनि कुरा र काम हेरेकी छैनन् । यस कारण पनि प्रस्ताव आएका अन्य..
नायिका रेखा थापा पर्सा–१ बाट चुनाब लड्ने ४ आश्विन २०७०, शुक्रबार २०:१९
वीरगञ्ज, ४ असोज । एमाओवादीले अन्ततः चर्चित नायिका रेखा थापालाई पर्सा क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्षमा टिकट दिने निश्चित गरेको छ । शुक्रबार एमाओवादी केन्द्रले नायिका थापालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । नायिका थापा उठने भनिएको क्षेत्रमा अघिल्लो संबिधानसभामा एमाओवादीको..
नायिका नम्रताका दिन फिरे ३ आश्विन २०७०, बिहीबार ०३:५३
एक समय झन्डैझन्डै कलाकारिता क्षेत्रबाट पलायनकै अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन् अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ । त्यतिबेला विवादमा व्यापक रूपमा तानिइन् उनी । त्यो अवस्थामा विचलित नभईकन आफूलाई सम्हाल्दा नम्रताका आगामी दिन सुखमय हुने देखिएको छ ।अब भने नम्रताको व्यस्तता क्रमश: बढ्दै जान थालेको..
कलाकर्मीलाई चुनावको रन्को २६ भाद्र २०७०, बुधबार २१:१९
मङ्सिर ४ गते चुनाव हुन्छ–हुँदैन ? अझै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि चुनावको माहोल र रन्को भने यतिबेला व्यापक नै छ । त्यसमाथि यसपटकको चुनावदेखि ‘सेलिबे्रटी’हरू पनि यसतर्फ आकर्षित हुन थालेपछि त्यो समाचारले बजार भने गर्माएको छ । प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवैमा कुनमा उठ्ने वा कसरी..
रञ्जनालाई अमेरिका टोक्नु न बोक्नु २६ भाद्र २०७०, बुधबार २१:१५
कलाकारिता प्रस्तुत गर्न अमेरिका पुग्ने अधिकांश नेपाली कलाकारको एउटै सपना हुन्छ ग्रिनकार्ड हात पार्ने । धेरैको यो सपना पूरा पनि भएको छ । कलाकारिता त वहाना मत्र हो उनीहरूको । आयोजकले पनि कार्यक्रमको वहानामा कलाकारसँग मोटो रकम लिएर अमेरिका पु-याउने गरेको सत्यता पनि अब लुक्न छाड्यो ।..
टिकट खोज्दै भुवन ओलीको घरतिर २० भाद्र २०७०, बिहीबार २१:११
रसरंगको मामिलामा निकै अगाडि छन् अभिनेता भुवन केसी । अँ साँच्चै अहिले त भुवनको नाम अगाडि विशेषण पनि थपिएको छ रोमान्स किङ हिरो भनेर । उनी दङ्ग पनि छन् आफ्नो चरित्रअनुसारको विशेषण पाइयो भनेर । तर, केही समययता आएर भने उनमा अहिले अर्कै चटारो थपिएको छ । उनलाई रोमान्स गर्न या फिल्म खेल्नतिर..
गायिका अञ्जु पन्त क्रिश्चियन भएपछि २० भाद्र २०७०, बिहीबार २१:०९
अहिले गायिका अञ्जु पन्त जुन स्थानमा छिन्, त्यसमा पुग्न उनलाई विशुद्ध रूपमा नेपाली गीत–सङ्गीतले नै साथ दिएको हो । नेपाली श्रोताहरूलाई उनले जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन । नाम, दाम, चर्चा, देश–विदेश अनि उचाइ र सम्मान अञ्जुलाई अन्य भाषा अनि धर्म र संस्कृतिमाथि गीत गाएर मिलेको होइन, नेपाली..
चर्चित नायक राजेश हमाल कांग्रेसबाट चुनाव लड्ने १८ भाद्र २०७०, मंगलवार २३:४०
काठमाडौं। नेपाली सिने क्षेत्रका चर्चित नायक राजेश हमाल नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ। अहिलेसम्म हमालले यो विषयमा मुख नखोले पनि सिने बजारमा यो विषय निक्कै चर्चामा छ। हमाललाई नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभामा ल्याउने तयारी गरेको चर्चा..